Jaamacadda Carabta oo war ka soo saartay xaladda siyaasadeed ee Soomaaliya | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Jaamacadda Carabta oo war ka soo saartay xaladda siyaasadeed ee Soomaaliya
written by Admin 27/07/2020
Qoraal kasoo baxay Jaamacadda Carabta ayaa looga hadlay xaaladda Soomaaliya, gaar ahaan isbadalka ka dhashay kalsooni kala laabashada Xukuumaddii Xasan Cali Khayre, Shirarka Heer Federaal iyo Heer Dowlad, Doorashada dalka, arrimaha bani aadamnimada iyo qodobo kale.
Jaamacadda Carabta ayaa sheegtay in ay si gaar ah ula socoto isbadalka iyo dhaq-dhaqaaqyada Siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan go’aankii Golaha Shacabka BFS 25-kii Bishaan July 2020-ka kalsoonida shaqo kala laabtay Xukuumadda.
“Fulinta geedi socodka dalka, la dagaalanka Argagixisada, gaarista heshiis qaran oo udhaxeeya DFS iyo DG, Gaarista horumar dhameystiran iyo wax ka qabashada xaaladda bani aadamnimo ee Soomaaliya waa mid u baahan in looga gudbo wadajir waana la soconaa sida ay wax u socdaan” ayaa lagu yiri Warka kasoo baxay Jaamacadda Carabta.
“Hoggaamiyaasha Soomaaliyeed waa in si niyad wanaag oo midnimo qaran ah ku gaaraan halka loo socdo, waxa aan bogaadineynaa heshiiskii Dhuusamareeb ee Madaxda Dowlad Goboleedyada 11-12-kii July, iyo kulankii xigay Heer Federaal iyo heer Dowlad Goboleed, Jaamacadda carabtu waxa ay bogaadineysaa tallaabo waliba oo horumar ah” ayaa lasii raaciyay bayaanka.
Jaamacadda Carabta ayaa sheegtay in ay taageersan tahay dadaalada siyaasadeed ee Soomaaliya ee laga gaarayo hannaanka doorasho waqti dhamaadka Dastuuriga ah Dowladda Federaalka.
Waxa ay soo jeedisay in dhinacyada siyaasadeed ee talo iyo go’aan ku leh geedi socodka Soomaaliya in ay u istaagaan in wax waliba lagu dhameeyo heshiis, wada hadal, is afgarad iyo xasilooni siyaasadeed oo muujineysa yedidiilo looga gudbayo caqabadda ku horgudban.
Jaamacadda Carabta oo war ka soo saartay xaladda siyaasadeed ee Soomaaliya was last modified: July 27th, 2020 by Admin
Turkiga oo saaray digniin culus oo ku socota Masar
Daawo Maamulka KGS oo Faah Faahin Ka Bixiyay Dagaal Ka Dhacay Maanta Gobolka Bakool
Dhageyso:-asaarada Arimaha Gudaha Koonfur galbeed oo shaacisay Wakhtiga uu furmayo Shirka maamul u samenta Ceelbarde